यस्तो छ सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष - हिमदुत
यस्तो छ सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष
प्रकाशित मिति : २०७८, २८ जेष्ठ शुक्रबार १९:०५
काठमाडौँ । आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सभामुख सापकोटाले पूर्वप्रधानमन्त्री र संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरूलाई बैठकमा बोलाएका थिए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, नेमकिपा नेता प्रेम सुवाल सहभागी थिए । झलनाथ खनाल भने भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाएका छन् ।
समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उपस्थिति भएनन् ।
लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसमा लाग्न सुझाव दिएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बताए । ‘उहाँको हातमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ’, सभामुखलाई तपाईंहरुले के सुझाव दिनुभयो भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले भने, ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लाग्नुहोस्, हाम्रो सहयोग रहन्छ, भन्यौँ । कोरोना महामारी चर्किएको छ । खोप व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यो विषयमा पनि हामी सबैको एउटै मत रह्यो ।’
सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै बाबुरामले थपे, ‘संविधानभित्र रहेर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि काम गर्छु भन्नु भएको छ ।’ बाबुरामले अर्को चुनाव नहुँदासम्म सभामुखको पद रहने हुँदा समसामयिक विषयमा छलफलको आयोजना गर्नु स्वभाविक भएको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न चुरेको गिटी, बालुवा निकासी गर्ने तयारी गरेकोप्रति नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यो गलत निर्णय भएकाले यसविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिएको उनले बताए ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गलत र असंवैधानिक भएको भन्दै बाबुरामले यसलाई निरंकुशताको परकाष्टाको संज्ञा दिए ।